ကျွမ်းကျင်သူပါဗျာ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွမ်းကျင်သူပါဗျာ….
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Mar 20, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 70 comments
ဦးကျောက်… ဂဇက်မှာ ရွာသားဖြစ်ရတာ အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ် ခင်ဗျာ။ ရွာထဲဝင်လို့ ရွာသူ၊ရွာသားများရဲ့လက်ရာကို ရွာ့ဘုတ်အုပ်ကြီးမှာ ဖတ်လိုက်ရင် ရင်သပ်ရှုမော အံ့တွေဩလို့ ချီးကျူးလို့ကို မဆုံးနိုင်ပါဘူး။ မိမိကျွမ်းကျင်ရာ စိတ်ဝင်စားရာကို ရေးတတ်လိုက်ကြတာများဗျာ၊ ဦးကျောက်မှာ မျက်မှန်ကို ဖုန်ပွတ်လို့ အပြူးအပြဲ သဲသဲမဲမဲကို ဖတ်ရတာဗျ။ နိုင်ငံရေးဖတ်မလား၊ လူမှုပြုပြင်ရေးကိုဖတ်မလား၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဖတ်မလား၊ ဘာသာရေးဖတ်မလား၊ ဘဝသရုပ်ဖော်ဖတ်မလား၊ အချစ်အကြောင်းဖတ်မလား၊ အချက်အပြုတ်ဖတ်မလား၊ ကျန်းမာရေးအကြောင်းဖတ်မလား…အိုဗျာ… တကယ့်ကိုစုံတဲ့ ဗဟုသုတ ဟင်းလေးအိုးကြီးပါ။ သက်ဆိုင်ရာပို့စ်တင်မက ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ ရွာသူရွာသားများရဲ့ အမြင်ကလည်း တယ်စူးရှလို့ ဦးကျောက်မှာ မျက်စိနှစ်လုံး ပွင့်ကတည်းက ဂဇက်ကိုဖွင့်ဖို့ စ စဉ်းစားမိတဲ့အထိ စွဲမိပါတယ်ဆိုရင် ပိုတယ်လို့ မဆိုကြပါနဲ့ဗျာ။ အဲသည်တော့ ဦးကျောက်လည်း ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ ဘာကိုများ ရွာထဲမှာ ဝေငှရမလဲလို့ စဉ်းစားမိတော့ ဘွားကနဲပေါ်တာပဲဗျို့။
ဟုတ်ကဲ့… ဦးကျောက်က ဘူမိဗေဒနဲ့ကျောင်းပြီးတာမို့ ဝသုနြေ္ဒ ဤမြေနတ်မင်းကို ဘယ်လိုနှိပ်စက် ရမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီးသိတာပေါ့ဗျာ။ ကျောင်းသားဘဝတည်းက တစ်တောဝင်၊တစ်တောင်တက် စိတ်မထင်ရင် သင်းကို အိတ်ထဲထည့်၊ အကြောမာတယ်ထင်ရင် တူနဲ့ဖဲ့တာပေါ့၊ ပြီးတော့ သင်းက သည်နားမှာ သည်လိုမျက်နှာပေးနဲ့ဆိုပြီး နေရာကိုမှတ်၊ သင်းမျက်နှာကို မြေပုံတောင် ထုတ်လာသေး။ ဘူမိဗေဒအထူးပြုနဲ့ တက္ကသိုလ်စတက်တော့ နောင်တော်ကြီးများက အားပေးရှာပါတယ်၊ “ငါတို့လို ငရဲကြီးမယ့်ကောင်လေးတွေ” တဲ့။ ဟုတ်ပါ့ဗျာ… ကမ္ဘာကြီးရဲ့သက်တမ်း၊ ကျောက်ကြီးသုံးပါးရဲ့ သက်တမ်း၊ သတ္တဝါတို့ရဲ့အစကို အာယုကပ်ကြီးတွေနဲ့ယှဉ်ပြီး မှန်းဆရတာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရ “မာလုကျပုတ္တ” လေးတွေကိုဖြစ်လို့။ အဲ… ထာဝရဘုရားရဲ့ GENESIS ကိုလည်း စောကြောမိသေးတာမို့ အပြစ်သားလေးတွေပေါ့ခင်ဗျာ။
ဆိုရရင်တော့ ဘူမိ ကျောင်းတော်သားဘဝ ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးခရီးထွက်လို့ စခန်းချမယ့်နေရာကို ရောက်ပြီဆိုကတည်းက အထုပ်အပိုးချပြီးရင် ပေါက်တူး၊ တူရွင်းငန်းပြားနဲ့ ခြင်းအသေးကို ကိုင်ပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့လိုက် ဤမြေနတ်မင်းကို စစ်ဆင်ရေး စတော့တာပါပဲ။ မိန်းကလေးများပါတဲ့ အဖွဲ့တွေက စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာ စခန်းချကြလို့ မထောင်းတာလှပေမယ့် ယောက်ျားလေးချည်းပဲ ဆိုရင်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တပ်စွဲတတ်တာမို့ ဝမ်းရေး ဖြေရှင်းဖို့ ရောက်ရောက်ချင်း စီစဉ်ရပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေဗျာ… မြို့ကျောင်းသားတွေဆိုတော့ တောထိုင်နည်း မတတ်ကြသလို ရွာနီးချုပ်စပ်က ခွေးလေခွေးလွင့်များကလည်း အာသာငမ်းငမ်းနဲ့ခင်ဗျ။ သခင်သန်းထွန်းကတော့ အိမ်သာတက်နေရင်း ရဲဘော်မြကြီး ခေါ် ကြုံတိတ်ရဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝမှာ အသက်ပေးလိုက်ရသလို ဟောသည့် မောင်ဘူမိများလည်း အတက်လေးကို မြွေပါးကင်းပါးကိုက်မိရင် ကုရာနထ္တိ၊ ဆေးမရှိ ဆိုတော့ ဘေးမသမ်းပဲ အေးချမ်းစွာ အိမ်သာတက်ဖို့အရေး ကိုယ်ထူကိုယ်ထပေါ့ခင်ဗျာ။
အိမ်သာဆိုလို့ နှာခေါင်းရှုံ့ပြီး အထင်တော်မသေးလိုက်ပါနဲ့ တောထဲမှာအိမ်သာဆောက်ရတာ ဘူမိနက်သန် နေရာမှန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျ။ ပထမဆုံး ကိုယ့်စခန်းရဲ့ လေအောက်အရပ် ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ နေရာလွဲရင်တော့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ ” လေညာအရပ်က အချစ် ” သီချင်းကို ခြုံစောင်ကို ခေါင်းအုပ်ပြီးမှ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ” လေတင်၊လေအောက် ” ကို သိပြီးရင်တော့ မြေနေရာရွေးရပါပြီ။ မြေအနိမ့်ပိုင်း ချောက်ထဲမှာဆို မိုးရွာရင် ရေလျှံ ချော်လဲရင် ကျင်းထဲကို ဒါရိုက်ဟစ်နဲ့ “ပလုံ” မှာဆိုတော့ မြေမနိမ့်မမြင့်မှာပေါ့ ခင်ဗျာ။ အဲ… အိမ်သာကျင်းတူးမယ့် နေရာအောက်မှာ ကျောက်ဖျာ ရှိမရှိ၊ သစ်ပင်၊ဝါးပင် ကြည့်ပြီး စူးစမ်းရပါသေးတယ်။ ဒါတောင် အရွေးမှားရင် ကျင်းတစ်ဝက်လောက်တူးမိမှ ကျောက်ဖျာနဲ့ တိုးလို့ကတော့ “သေပြီဆရာ” လို့ အော်ပေရော့ပဲ။
ကိုင်း… မြေနေရာ ရွေးပြီးရင်တော့ ငါးယောက်တစ်ဖွဲ့ သစ်၊ ဝါးရှာ တာပေါ်လင်စ ပုံလို့ လုပ်ငန်းစဖို့ပြင်ကြပါတယ်။ အကုန်လုံးက လူပါးတွေချည်းဆိုတော့ မြေကျင်းမတူးချင်ကြပါဘူး။ အဲသည်တော့လည်း တစ်ယောက်ကို တစ်ပေ တူးဖို့ ဘယ်ကောင်ပထမ၊ ဘယ်ကောင်ဒုတိယ မဲနှိုက်လို့ ရွေးကြတာပေါ့ဗျာ။ အပေါ်ယံမြေသားမှာ ကျောက်တုံးတွေ ရှိတတ်တာမို့ ထိပ်ဆုံးကျတဲ့ ကောင်တွေကတော့ ကံဆိုးတဲ့ “မောင်ရှင်” တွေပေါ့။ အချင်း သုံးပေလောက်ကို တူရွင်းနဲ့ဆွလို့ တစ်ပေချင်း တစ်ယောက်တစ်လှည့်တူးလိုက်တာ ငါးပေလောက်ဆိုရပါပြီ။ ဝါးခြမ်းပြားကို ကွက်ကျားရက်၊ ကျင်းမပြိုအောင် ကာပြီးရင်တော့ အလယ်တည့်တည့်မှာ တစ်ပေလောက် အပေါက်ချန်၊ အပေါ်ကနေ ပျဉ်ပြားခင်းလိုက်တာပေါ့။ ကျင်းသိပ်နက်ရင် ရေစိမ့်၊ ကျင်းတိမ်ရင် အချိန်တိုအတွင်း ကိုယ်ပြုသော ကံ၊ ကိုယ့်ထံ ပြန်လာမှာဆိုတော့ ကျန်းမာတဲ့ သူကောင့်သား ငါးယောက်အတွက် တစ်ယောက်ကို တစ်နေ့ သုံးဆယ့်ငါးကျပ်သားနှုန်းနဲ့ တွက်လိုက်ရင် တစ်လစာဆို သုံးပေအကျယ်၊ ငါးပေအနက်မှ အဆင်ပြေမှာလေ။
ကျင်းနဲ့အခင်း ပြီးရင် ကျန်တာကတော့ တိုင်လေးတိုင်စိုက်၊ အမိုးအုပ်လို့ တာပေါ်လင်စ ဘေးသုံးဘက်ကကာ၊ မြွေပါးကင်းပါးနဲ့ မိုးရေမဝင်၊ အနံ့လုံအောင် ပတ်လည်ကို မြေဖို့၊ အရှေ့ကိုဝါးကပ်၊ ဒါမှမဟုတ် တာပေါ်လင်စ အရှင်ကာလိုက်ရင် တောထဲမှာ တင့်တင့်တယ်တယ် ဂုဏ်ထည်တယ်ခင်ဗျ။ ဪ… မေ့ခဲ့လို့… သုံးပြီးတိုင်း အဖုံးအုပ်၊ ဈေးနေ့ဆိုမြို့တက် ထုံးမှုန့်အိတ်ဝယ်ပြီး ကျင်းထဲနဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကို နေ့တိုင်းသာ ဖြူးပေးရင်၊ ဟိုအကောင် သည်အကောင် မမြင်ရဘူးခင်ဗျ… ရှယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ…ဒါပေမယ့် လုံခြုံရေးအသိ မရှိရင်၊ တစ်ခြားအဖွဲ့က ငပျင်းများ လူလစ်ရင် ဝင်ဗျင်းကြမှာဆိုတော့ သော့ခလောက်တော့ ကြံဖန်ခတ်ရတာပေါ့။ အဲသည်လို ကွန်မြူနစ် အရင်းကျမ်းကိုကျေ… ဟုတ်ပေါင်၊ မြေကြီးကို နှိပ်ကွပ်လာတာဆိုတော့ အခုလည်း အလုပ်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေးပါ။
နောက်ကြောင်းကို ပြန်ပြောရရင် ကျောင်းပြီးတော့ ဆရာကြီးများက မှာတမ်းချွေပါတယ်၊ “ဘူမိဗေဒနဲ့ အသက်မွေးရင် ပိုတော်တဲ့ကောင်က ဤကမ္ဘာမြေကြီးကို ပိုဒုက္ခပေးမှာ” တဲ့။ ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ… ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ တွင်းထွက်တွေရှာ၊ ဆည်တွေဆောက်၊ ငွေရှင်အလိုကျ အမျိုးစုံ မွှေနေတာ ဦးကျောက်တို့လို မောင်ဘူမိများက အရင်းခံမို့ တိုင်းရေးပြည်ရေး ဝင်မဆွေးနွေးရဲပါဘူး၊ ကိုယ့်ခြေထောက် ကိုယ်သေနတ်နဲ့ပစ်သလို ဖြစ်မှာခင်ဗျ။ နောက်ပြီး … ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း တခြားပညာရပ်အကြောင်းလည်း ထဲထဲဝင်ဝင်မသိ၊ ဦးကျောက်ရဲ့ မူလဘူတ နဂိုလက်ရင်း ကျွမ်းကျင်ချင်းက “အိမ်သာကျင်း” တူးတာဆိုတော့… အဲဒါလေးကိုပဲ စိတ်ဝင်စားရင် ဆွေးနွေးပါရစေ ခင်ဗျား…
ဆိုလိုချင်တာက ဦးကျောက်က Professional တွင်းတူးသမားပေါ့နော်….
ဦးကျောက်က လူ နောက်ကြီးရယ်။
သူတကယ် တူးတာ က ဟောရိဇုန်တယ် တွင်း။ (မြေအောက်ရထားလမ်းကိုပြောတာပါ။)
ခု ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ ရေးတာက ဗာတီကယ် တွင်း။
အား… ဟိ ကိုကြောင်ဝတုတ်
ခင်ဗျားတို့က အမြစ်တူးတယ်၊ ထောင်ဖောက်တယ်၊ အနရွိုက်တွေဘာတွေ….
တက္ကနီကွေးအကြောင်းပြောကြရင် ကျုပ်မှာအားငယ်လို့ တတ်သည့်ပညာမနေသာ မျှဝေမိတာပါဗျာ…
အကိုကြီး တူးဦးမလားဟင် အိမ်သာကျင်း…
ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်း အရင်က ဘိုးပိုင် (Bored Piling) မှာလုပ်ဖူးတယ်လေ…
အိမ်သာကျင်း တူးတဲ့ …
မက်သတ် စတိတ်မန့်ကို အရင် ဆန်မစ် လုပ်ပါအေ။
မစ်ရှင်နရီ လစ် လည်း လိုချင်တယ်။
ဆေ့(ဗ) ဝေါ့ ပရိုစီဒီရာလဲ ရေးပေး။
ရစ်(စ) အစက် စမန့် လည်း ပရပဲ ပါ။
စပယ်ရှယ်လစ် ဆိုလို့ ဒေတာ အပြည့်အစုံတောင်းမိတာပါ။
ဒါနဲ့ အဝီစီတွင်းရော တူးတတ်သလားဟင်။
ဆြာမက BCA မှာသင်တန်းတက်ပြီး ဂလိုလာမေးမယ်ထင်လို့…
ငါးပေနဲ့ တွက်ပြတာပါ၊ နှစ်မီတာ မကျော်ဘူးလေ…ဟီ ဟိ
မက်သတ် စတိတ်မန့် နဲ့ မစ်ရှင်နရီ လစ်က အပေါ်မှာပြောခဲ့ပြီးပြီ…
တစ်ပေချင်းတူးပါတယ်၊ ဝါးခြမ်းပြားကို ကျင်းမပြိုအောင် ကွက်ကျားရက်ပြီးကာပါတယ်ဆိုမှ…
ဆေ့(ဗ) ဝေါ့ ပရိုစီဂျာ နဲ့ ရစ်(စ) အစက် စမန့် လာတောင်းနေသေးတယ်…
ညှင်း… ညှင်း Trial Pit သင်ခန်းစာကို စာမကြေဘူး… ကျန်း
ဟား … ခုမှဘဲ ဆွေးနွေးဖော် ဆွေးနွေးဖက်တွေ့တော့တယ်ဗျာ …. ။မန်းဂေဇက်ထဲ ရောက်ကတည်းက ကိုယ်နဲ့လိုင်းတူတဲ့သူတွေ မရှိတော့ ဟိုရေးဒီရေး လျှောက်ရေးရင်း ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ လိုင်းကနေ သွေဖယ်ပီး ပေါက်တတ်ကရတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။ကဲစလိုက် ကြရအောင်ဗျာ …။
လူ၅ယောက် x ရက် ၃၀စာ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပမာဏက အချင်း ၃ပေ၊ အနက် ၅ပေ ဆိုတော့ ပမာဏအားဖြင့် ဘယ်လောက်ဆန့်မလဲ သိချင်ပါတယ်။ ပိဿနဲ့ပြောနိူင်ရင်ပြောပါ ဒါမှမဟုတ် ကီလိုနဲ့လဲ ပြန်တွက်ပေးနိူင်ပါတယ်။
Source : ၁တန် = ၆၁၀ ပိဿာ
လူ ၅ယောက်အတွက် ၃ပေ ၅ပေလိုတယ်ဆိုရင် လူရာဂဏန်းရှိတဲ့ မန်းလေးဂဇက်အတွက် ချီးတွင်းကြီး တူးမယ်ဆိုရင်-
၃ လိုအပ်တဲ့ မြေပမာဏ
၅ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိုမလို
စတာတွေကို အသေးစိတ် တွက်ချက် ပေးစေလို၊ ပြန်ကြားစေလိုကြောင်း။
ရာရှင်စကေးအရ လူတယောက်ဟာ ဆန်နိူ့ဆီဗူး ၁လုံး နဲ့ အသား+အသီးအရွက် ၅ကျပ်သားခန့်ဘဲ(တောထဲ တောင်ထဲ) စားသုံးခွင့်ရပါရဲ့ ပြန်ထွက်နှုန်းက ၃၅ကျပ်သားဆိုတော့ သိပ်သဘာဝမကျဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့လို အထွက်နှုန်း ကောင်းတဲ့ ဘူမိကျောင်းသားတွေ များလာရင်တော့ ပြည်ပရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိနေပါကြောင်း။
ဆြာကရဲစည်ရယ်… တကယ် အလုပ်အပ်မှာလား…
အကြမ်းဖျင်း ကျုပ်က ဘေးထွက်ပစ္စည်းနဲ့ တခြားပရောဂပါတွက်ပြီး…
အဟဲ… တကယ်သုံးလို့ရမှာက ကျင်းရဲ့ သုံးပုံတပုံ…
ကျုပ်တို့က စစ်သားမဟုတ်တော့ တွေ့ရာအကုန်စားတာကိုး…
တွက်လဗျာ….မနက်ခင်းစာ၊ နေလည်စာ၊ ညနေအမြည်း၊ ညစာ…ဟီး ဟီး
ရဘူးဗျာ ကျုပ်တို့က ကွမ်းစားထွေးပစ်တွေ
အူး၎ တရက်ကို ၁ပိဿာ စားရင်တောင် …. ။
တနေ့ ၃၅ကျပ်သား ပြန်မထွက်ဘူး …
မနက်ပိုင်း နွားတွေ တံပိုးမတပ်ခင် အနက် ၁တောင် အကျယ် ၁တောင် အရှည် ၆ပေခန့်ရှိတဲ့ နွားစခွက်မှာ
ပဲဖတ်နဲ့ ကောက်ရိုးကို စင်းပီး အပြည့်အသိပ် တည့်တယ် ရေပါရောနယ်ထားတော့ ခန့်မှန်း အလေးချိန် ၄ပိဿာခွဲလောက် ရှိရဲ့။ ဒါကို နွား၂ကောင်က အပြောင်တီးတာ ဇလုပ်ထဲတော့ ကျန်မပေါ့လေ။
ဆိုတော့ ၂နာရီအကြာလောက်မှာ စပါတဲ့ မောနင်းမစင် အစိုကို ကောက်ချိန်ပါက အစိတ်သား အပြည့်ကြောင်း။
ဘိဇစ်နပ်အရ ပြောရရင် ၁ပေပတ်လည် နချီးခြောက် အပုံ ၂၇ပုံလောက်မှ တပိဿာရတာမို့ …….. အစို ၃၅ကျပ်သားထွက်ရင်တော့ … မြက်ကျွေးပီး ….ဟင်းဟင်း
လုပ်ဖြစ်ရင်တောင် တရုတ်နဲ့ မလုပ်ဘူး မတော် နိူင်ငံရေးနဲ့ ငြိပီး ဆန္ဒပြနေမှဖြင့် … ကွိကွိ
ရော်… ခက်ပြီ ဆြာကရဲစည်ရယ်…
ခင်ဗျားတွေးမှ ကျုပ်တို့လည်း နွားလုံးလုံးဖြစ်ပြီ….
ခီညားလို ဝမ်းချုပ်နေလို့ တစ်နေ့တစ်ခါပဲပါတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဟုတ်မှာပေါ့…
တွင်းတူးတဲ့အကြောင်း. လှည့်ပါတ်ကောက်ကွေး.. တူးသွား.. အဲ.. အဲ.. ပြောသွားလိုက်တာများ.. ဆိတ်ဝင်စားစရာ..။
ကြွက်ပြင်းလုပ်မလား.. တွင်းသစ်တူးမလား.. တွင်းတူးသမား မြန်မြန်ပြော..။
သူကြီးကလဲ… တွင်းတူးပါ့မယ်ဆိုမှ… တွင်းဟောင်းဖြစ်ပါ့မလား… ခက်နေပါပြီ…
တူးတတ်ပါတယ်ဆိုမှ တွင်းဟောင်းဝင်ပြီး ကြွက်ပျင်းလုပ်ပါ့မလား ခင်ဗျ…
လူကို အထင်မစမောပါနဲ့ သဂျီးရယ်… ဟီ ဟိ
အင်း … အဲ .. အင်းး .. အဲ ….
ကျင်းတူး တဲ့ဟာ သိမှ မသိဘဲနဲ့ …
ကျင်းတူးဒါဆိုလို့ … ငယ်ငယ်က ကျောက်ဒိုး ထုဖို့ တူးတဲ့ ကျင်းပဲ တူးတတ်တာကလား ..
ဘာမှ ကြောဒေါ့ဝူးးးနော် .. ဥရေးကျောက် ….
ကိုယ့်ဥရေး ပို့စ်မို့ ညက်နှာ ဝင်ပြဒါ …… ဟီးဟီး …
ကိုင်း… တူဂရေး မောင်အံစာ
ဘွဲ့ ရ ဘူမိ
ကျောက်ဖျာ စစ်လို့ 
တူးဖို့မဲချ
တကယ်ကျင်းတူးစားဖို့ပလန်ရှိဒလားဟင်………..
ဒါဆို ကျုပ်ကဗျာကို မသုံးပါနဲ့ ဗျာ… ခင်းည ချီးပွားရေးလေး မဖြစ်ပဲနေပါအုံးမယ်……
အဲ့ဒါမှ တားမရလဲ သုံးပေါ့ဗျာ…… ဒါပေမယ့် အိမ်သာနံ့ တော့ ရမယ်….
ကျွမ်းကျင်သူဆိုတော့ ဘာတွေများကျွမ်းကျင်မလဲဆိုပြီး ၀င်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာ..
ဘာမှ ၀င်မဆွေးနွေးနိုင်အောင် ကျွမ်းကျင်ပါပေရဲ့…
ဆွေးနွေးလို့မရအောင် ရေပိတ်စပါးပြောပါမှ အပေါ်က ပညာရှင်ကိုရဲစည်နဲ့ မိသွားသေးတယ်…
ဘာရယ်မဟုတ် ရွာထဲမှာစာရေးကျဲလာကြလို့ ပျော်စေပြက်စေပါဗျာ…
ဒါနဲ့ အူးလေးအရေးအသားနိုင်နင်းပုံကိုတော့ လေးစားပါကြောင်း.နဲ့
ကျွမ်းကျင်သူ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အူးလေးကလိုက်ဖက်မယ်ထင်မိပါကြောင်း
ဝေးတာ။ ပိန်းတာတော့ တွင်း ဗဟုသုတမှ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
အလှကြည့်ပါဆိုတဲ့ တံတားကို ဖြတ်လျှောက်ကြည့်ချင်သေး။
ဦးကျောက်။ ပြောလိုက်စမ်းဘာဗျာ။ စိတ်လည်း မဝင်စားနဲ့လို့။
“တွင်းသာနက်၊ မောင်မင်း မတူးတတ်” လို့။
အဲ့.. တံတားကိုလှလွန်းလို့ တခေါက်လောက်..
ဒီအချိုးနဲ့များ အူးကျောက်ကို သူက ကလန်ချင်သေးတယ်..
ကဖက်ကပ်က ခင်ဗျားလို ပညာလျှိုထားတယ်ဖြစ်မယ်…
တံတားပေါ်က ဇာတ်လမ်းကတော့ ဆြာဂီ သင်ပေးတဲ့ အတိုင်း
ကိုယ်လိုသလို ဆွဲတွေးလိုက်တာပါ ရယ်…
အူးလေးလည်း တွင်းမတူးခင် သိဖို့တော့ လိုမယ်ထင့်..
ဆိုတော့လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ လက်ချာပြန်လိုက် လိုက်ပါအုံး နော့..
ရထားလည်းပါတ်မစီးဂျဘာနဲ့ တံတားလည်း ဖြတ်မလျောက်ဂျဘာနဲ့…
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လူတိုင်းမကင်းနိုင်တဲ့ ထိတွေ့မှုဖြစ်ပေမယ့်…….
လျှံနေပီးမတွေးမိတဲ့လူကများမှာပါ….. ကျုပ်လည်းဒီလောက် ထည်ထည်ဝင့်ဝင့်
နားမလည်ဘူးရယ်……. အတွေးအခေါ်ဗဟုသုတပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရပါ၏….
ရှူးတိုးတိုး…ကျင်းနက်ရင် မြေစာတင်ရခက်သဗျ… အဲဒါလျှို့ဝှက်ချက်…
အရေးအသားကတော့ လေးစားထိုက်တယ်ဗျို့။ အားကျမိပါရဲ့
Sky ko ko…
ငပိဖုတ်တောင် ဆရာ မပြ နည်း မကျလို့ ပြောကြတယ် မဟုတ်လား။
ငါ့ဝမ်းပူဆာမနေသာ ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့… အဲ မဟုတ်
ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိ ဆိုသလိုပေါ့… ကြိုပြင်ထားရတာလေ…
ဦးကျောက် ပြောတဲ့ ကိစ္စက တော်တော်လေးကို အရေးကြီးပါတယ်
ရန်ကုန် မန်းတလေး နေပြည်တော်လို မြို့ ကြီးတွေမှာတောင် သန့် သန့် ရှင်းရှင်းနဲ့ အီးပါချင်စရာ သေးပေါက်ချင်စရာ အိမ်သာတွေ နဲနေပါသေးတယ်
နယ်မြို့ တွေ ဆိုရင် ပိုဝေးပြီပေါ့
အီးပါသေးပေါက် အကြံပြုအမတ်အဖြစ် ဦးကျောက် ကို မဲပေးပါကြောင်းရယ်ပါလေ
တောပိုင်းသွားရရင် အဲဒါက တစ်ဒုက္ခဗျ…
အဲသည်တော့လည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ရှင်းရတာပေါ့…
ဗိုက်နာမှ အိမ်သာထရှာလို့ မဖြစ်သေးဘူးလေ… ဟီး
ဦးကျောက်ခဲ တောင်မလေးက လေပေါ် အိမ်ဆောက်ချင်တာတဲ့… မြေဂျီးထဲ တွင်းတူးနေဘူးတဲ့… အဲဒါ ဘိုလုပ်မဲ..။
ဂျစ်ရင် မြေကြီးပေါ်ဆင်းခဲ့လို့ ပြောမှာ…
ကြောင်ကုတ်မှာစိုးလို့ လှိုဏ်ခေါင်းတူးပြီး ဥ ထားမှာ…
တီကောင်အကြောင်း ရှင်းရှင်းပြောပါ မိုးစက်ရယ်… ဟီ ဟိ
အွန်… မျက်စိထဲ တီကောင်ပဲပြေးမြင်တယ် :shock:
ဦးကျောက်က တီကောင်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ ပြေးမြင်လိုက်တာလား….
ဦးကျောက်ကို မိုးZ ကော်မန့်လေးဖတ်ပြီး…
မြေးဖြစ်သူကတော့ အနီးအနားမှာ… တီကောင်တစ်ကောင်ကို ဖမ်းပြီးတော့ မြေကြီးတွင်းထဲကို ထိုးထည့်နေတယ်…
တီကောင်ကပျော့ခွေနေတော့ ဘယ်လိုမှထည့်မဘူးဖြစ်နေတာကို အဖိုးလုပ်သူက သတိထားမိတယ်တဲ့ကွယ်…
အဲဒီမှာ အဖိုးလုပ်သူက မြေးရယ်… ဘယ်လိုလုပ်တီကောင်ကို ထိုးထည့်လို့ရမှာလဲ…
မြေးလုပ်သူက အဖိုးကို စိန်ခေါ်သတဲ့…
အဖိုးအိုကလဲ ၅၀၀ ပေးမယ်လို့ဖြေလိုက်သတဲ့…
အဲဒီအချိန်မှာ မြေးလေးက အိမ်ပေါ်ပြေးတက်သွားပြီး
သူ့အမေ ဆံပင်အလှပြင်ရာမှာသုံးတဲ့ ကော်စပရေးဗူးကို သွားယူသတဲ့
တီကောင်ကို စပရေးနဲ့ မှုတ်ပြီးတော့… တွင်းထဲကို ထိုးထည့်ပြလိုက်ပါတယ်…
အဖိုးဖြစ်သူက တအံ့တသြနဲ့ မြေးဖြစ်သူကို ချီးမွန်းပြီးတော့
ပိုက်ဆံယူဖို့ အိမ်ပေါ်ကို တက်သွားပါတယ်…
ကလေးငယ်ကို ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ ထုတ်ပေးပါသတဲ့…
ပြီးတော့ ကလေးငယ်ကို ပြောလိုက်ပါတယ်…
၅၀၀ က.. မင်းအဖွားပေးတာ…
ဒီကလေးရဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေကြောင့်.. သတ္တ၀ါတွေသေကြေပျက်စီးကုန်ပါပြီကွယ်..။
တော်ပြီ.. နင်တို့ကပ်တဲ့.. ဆွမ်းမစားတော့ဘူး..။
ခွိခွိ.. အူးလေးပဲ လိုဏ်ခေါင်းတူးပြီး အုထားမှာဆို အဲဒါကြောင့် တီကောင်ပဲမြင်တယ်လို့ပြောတာပါ တိုရီး အဲ ကိုကြီးဖတ်တီးကတ်လုပ်မှ အမှုပိုကြီးသွားပြီ ကန်တော့နော် အူးလေး ကန်တော့ ..
အူးလေးမှာ စဉ်းစားရတာ ခေါင်းကို ချာချာလည်လို့…
ဦးကျောက်ခဲ အိမ်သာတွင်းက ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေတူးရတာလားဟင်။
ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တုန်းက တူးတဲ့သူကိုတောင် မမေးလိုက်မိဘူး မင်းတို့ ဘူမိဗေဒပညာရှင်လားလို့လေ။
ဟဲ ဟဲ အိုင်ဆေး ကိုငြိမ်းမောင်…
ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ပိန္နဲပင်ဆွဲထဲ့လိုက်မယ် :harr:
ဒီအဆင် နဲ့ဒီအဆင် သိတာပေါ့ဗျာ…
ပိန္နဲပင်ဆွဲထဲ့ ပြီးရင် ကျုပ်ကို ဂုန်နီအိပ်ပေးဦးမယ်…
တဟီးဟီးရယ်တော့လူတွေကကြည့် တယ်
မကြီးမငယ်နဲ့ သငယ်ပြန်နေလားထင်မှာပေါ့ ဗျာ
အသာလုပ်ပါ ဝန်ထောက်မင်း ရဲကိုကိုရယ်…
နတ်ပြည်မှာတော့ အဲ့ကိစ္စ ရှင်းစရာမလိုဘူးဗျ
ပညာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖတ်ကာ ကြုံရင် အကူအညီတောင်းဖို့ မှတ်သွားပါတယ်လို့
နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးလေးတွေ အဲ့ကိစ္စ ရှင်းစရာမလိုရင်…
အဲ့ဟာတွေ ဘယ်ပါတော့မလည်းဗျ… ရှင်းဘာ.. ဟီ ဟိ
လောလောဆယ်တော့ ဦးမာဃ လူ့ပြည်မှာမို့
သူတို့တွေလဲ ပါ ပါအိ
အကူအညီ တောင်းရမည် ဖြစ်ပါအိ :hee:
ချစ်လွန်းလို့ အာခံတွင်းထဲ ငုံထားတယ်ဆို… အခုဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်တာတုန်း…
ငုံရအောင် ကျွန်တော်က တာနောယက္ခမှ မဟုတ်တာဗျာ
ပြီးတော့ ငုံထားရင် သူတို့က ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ကိစ္စရှင်းကြမပေါ့ဗျ
အီး ဘစ်ဇနက် လုပ်လို့ရပြီပဲ။ ရေးပြတာတော့ ပါချင်စရာကြီးပါလား ဟရို့။ အသိဘူမိ တယောက်တော့ တူလေးတဆဆ နဲ့ ဟိုခေါက်ဒီခေါက်ပဲ။ အခုရှိရှာတော့ဘူးဗျာ၊ ငှက်ဖျားနဲ့ လစ်သွားရှာတယ်၊ ဝါးဖြူတောင် တို့ ကျောက်ကြီးတို့ဖက်ပေါ့။ အစိုးရက ဘာမှတောင်လုပ်မပေးပါဘူးဗျာ၊ ဝမ်းနည်းစရာပါ
ကို awra-cho ရေ
အဲဒါပဲဗျာ… ကျုပ်တို့ မောင်ဘူမိများက ငှက်ဖျား၊ အသဲ၊ တီဘီတို့နဲ့သေဖို့…
စံရန်ပေးထားသလား အောင်းမေ့ရတယ်… အစိုးရကိုတော့ ထည့်တွက်မနေပါနဲ့တော့ဗျာ…
ဟေ့လူ ကိုညိုဝင်း….ကျုပ်ခိုင်းထားတဲ့ ရီပို့စ် မပြီးသေးဘူးလား
အဲ…ဟို…အိမ်သာကျင်းတူးနေလို့ ပါ ဘော့စ်…အဲ့….
သာ..ဘော့စ် ကော အကူအညီ လိုသေး လား…
ခင်ဗျား ဘော့စ်ကို ပြောလိုက်ပါ… နက်နက်တူးပေးပါ့မယ်လို့..ဟီ ဟိ
အဟီး… ရီပို့စ်ကတော့ ကျုပ်လည်း မကယ်နိုင်…
ရှားရှားပါးပါး ကွန်မန့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ…
ပရိုတွေမှ လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို ဦးကျောက်လုပ်နေတာပဲ။
ဒီလုပ်ငန်းတွေကလည်း လုပ်ပြီဆို နေ့ချင်းညချင်း ချမ်းသာတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတာပဲနော်…
ဦးကျောက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရတော့ ချေးလို့ ငှားလိုရတာပေါ့…
ပြောပါတယ် ပရိုပါဆိုမှ… ဘာပရိုလဲလာမမေးနဲ့.. ခုသိပြီမဟုတ်လား…
ဟီ ဟိ ချေး(ချီး) ချင်ရင်… ကျင်းတူးပေးမယ်…
ကျင်းတူးချင်ရင် ပြောပါနော်… ဟီ ဟိ…
ထုံးမှုန့်ဖြူးတာဘေးဘက်တွေဆိုရင်မရဘူးလား။ တွင်းထဲကကောင်တွေအတွက်ပါဖြူးရင် သူတို့မရှိရင် ကျင်းမြန်မြန်ပြည့်လာမယ်ထင်တယ်ဗျ…….. ကျွန်တော်ထုတ်သမျှ ဒီကောင်တွေရှင်းလိုက်ရင် ကျင်းပြည့်နှုန်းကျသွားနိုင်မယ်ထင်တယ်…
ကျင်းထဲကို ထုံးမှုန့်မဖြူးလို့မရဘူးခင်ဗျ… ယင်တလောင်းလောင်းဖြစ်သွားမယ်…
ကံမကောင်းရင် ကိုယ်ကဗုံးအကြဲ သူတို့ကတိုးထွက်… စဉ်းစားကြည့်ပါလေ…ဟီ ဟိ
ပြောပြမယ်ဗျာ… နဲနဲတော့ အော့အော့ပေါ့…
တညနေသား စခန်းမှာ ထမင်းစုစားနေတုံး…
လေထဲကနေ အကောင်ဖြူဖြူတစ်ကောင် ထမင်းဝိုင်းနားရောက်လာလို့…
ပြူးတူးပြဲတဲ ကြည့်မိပါတယ်… ယင်မမဲရိုင်းကြီး ထုံးမှုန့်ကပ်နေတာဖြစ်နေလို့…
ကျုပ်တို့မှာ စားစရာတွေအုပ်ပြီး လိုက်ရိုက်ကြတာ…
ထမင်းဝိုင်းကိုပျက်ရော… ဟီ ဟိ…
တစ်ကယ်ဒေါ့ ကျင်းတူးသမားများဟာ လောပန်းလောင်းတွေပါ
လောပန်းလောင်း မလောင်းတော့မသိဘူး၊ ငှက်ဖျားနဲ့ကွိကုန်ကြတာတော့ များပြီ…
ဟား…….. ဟိုသီချင်းလေးတောင် သွားသတိရဗျာ ….။ ဘာတဲ့ ဒီတစ်ကျင်းမရရင် နောက်တစ်ကျင်း အားမလျော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ ကျောက်တူးသမားလေးသီချင်းကို ………..။ အူးကျောက်လည်း ဒီတစ်ကျင်းနဲ့ မလုံလောက်ရင် နောက်တစ်ကျင်းသာတူးဖို့ အသင့်ပြင်ထားပေရော့……….။ ခုတော့ ခုတော့ ကျင်းမတူးတော့ဘူးဗျ….။ ကျင်းဟောင်းက ချီးဟောင်းတွေ စက်နဲ့စုပ်ပြီး ထုတ်ပစ်တာ ဘယ်နားသွားစွန့်သလဲတော့မသိ …။ အပေါ်က ရဲစည်တို့လယ်ကွက်ထဲများ သွားပုံခဲ့သလားမသိဘူးနော့
ကျောင်းသားဘဝ တောထဲမှာတုံးကတော့ ” ဒီတစ်ကျင်းပြည့်ရင် နောက်တစ်ကျင်း” ပေါ့…
ကျင်းထဲက ပစ္စည်းဟောင်းတွေကတော့ ထုံးမှုန့်နိုင်နိုင်ဖြူးပြီး မြေပြန်ဖို့ရသဗျာ…
ရန်ကုန်မှာ ဟိုးတုံးကတော့ စက်နဲ့စုပ်ပြီးရင် “ချီကာဂို”ကို ပို့သတဲ့…
ဟီး ဟီး ချီးကားဂိုး တာ ပုဇွန်တောင်ချောင်းလေ… အခုတော့မသိ…
ကရဲစည်တို့ စိနပြည်မှာတော့ စိုက်ခင်းထဲလောင်းသတဲ့… အား ဟိ